चिसोमा हात–खुट्टाको जोर्नी दुख्छ ? अब यसो गर्नुस् | नेपालमाला
चिसोमा हात–खुट्टाको जोर्नी दुख्छ ? अब यसो गर्नुस्
नेपालमाला ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार
काठमाडौं : चिसो मौसम शुरु भइसकेको छ । यसबेला अनेकथरी शारीरिक समस्याले मानिसहरुलाई सताउने गर्दछ । तीमध्ये एउटा साझा समस्या हो, आर्थराइटिस वा गठिया रोग । सामान्यतया जोर्नी दुख्ने समस्या सबै लिंग र उमेर समूहमा देखिने गर्छ । तर ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र महिलाहरुमा यसको दुखाइ बढी हुने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
सामान्यतया आर्थराइटिस दुई किसिमको हुन्छ । एउटालाई अस्टियो आर्थराइटिस भनिन्छ भने अर्काेलाई रूमेटाइड आर्थराइटिस नाम दिइएको छ ।
घुँडा, कुहिनो, काँध, हात वा पूरै शरीरको कुनै पनि जोर्नीमा यो समस्या देख्न सकिन्छ । रुमेटाइड आर्थराइटिसमा थकान महसुस हुने एवं रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर हुँदै जाने गरेको देखिन्छ । साथै, भोक नलाग्ने जस्ता समस्या पनि देखिन्छ ।
भिटामिन डी प्राप्त गर्नका लागि अन्य पूरक खानेकुरा पनि खान सकिन्छ । जाडोमा मानिसहरु प्रायः हाइड्रेटेड रहन बिर्सन्छन् र शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै समस्या देखा पर्छ । विशेषगरी शरीर दुख्ने समस्या कम पानी पिउँदा निम्तिने समस्या हो ।
जाडो मौसममा घरभित्र बस्दा पनि मोटोपन बढ्न सक्छ । बढी तौलले घुँडा र खुट्टामा समस्या पैदा गर्छ । चिसोमा व्यायाम र काम गर्न चुनौतीपूर्ण भएपनि सक्रिय भइरहनुपर्छ ।
आज ५८० वर्षयताकै लामो चन्द्र ग्रहण
सातदोबाटोसँग फ्रेन्ड्सको बराबरी